Kedu ihe bụ oke ebili mmiri na gịnị kpatara anyị ji echegbu onwe anyị? | Network Meteorology
Nụtụla banyere oke ebili mmiri? Ha bụ ihe ịtụnanya nke amachabeghị, mana nke ahụ nwere ike ibute nnukwu mbibi na mpaghara ndị dị n'ụsọ osimiri. Ihe na-akpata ha bụ ọgba aghara nke ihu igwe na-ejikọ na nrụgide dị ala na ifufe, kpatara mmegharị nke efere tectonic, nke na-ebute oke osimiri.
Ọ bụ ihe dị oke egwu, dịka ha nwere ike bute ọnwụ karịa ala ọma jijiji. N'ezie, bụ ihe kpatara 90% nke ọnwu ndị ajọ ifufe hapụrụ.
Foto - Pierre cb
Enwere ọtụtụ usoro na-esonye na mgbanwe nke ebili mmiri: nrụgide nke ikuku, ikuku, ebili mmiri, mmiri ozuzo na ntụgharị ụwa. Nrụgide nke oke mmiri ozuzo na-eme ka mmiri dị elu na mpaghara ala dị ala, na belata ya na mpaghara nsogbu dị elu. A ghaghị ịgbakwunye nke a na ebe ndị ahụ mmiri na-emighị emi ebili mmiri ahụ ga-adị elu ma dị ike karị.
Nke a n'onwe ya bụ nsogbu, mana dị ka ọmụmụ si n'aka ndị Joint Research Center nke European Commission (JRC, maka acronym ya na Bekee: Joint Research Center), site na 2100 na Europe anyị kwesịrị ịkwadebe, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbawanye ruo 15%.
Okpomoku di n’uwa n’ile adi anya n’azu, ebe oke osimiri gha n’iru n’iru, na a gha enwewanye oke ikuku. N'ihi ya, ọ ga-adị mkpa mee ihe iji kpuchido mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, karịsịa na nke Oké Osimiri Ugwu na ndị nke Oké Osimiri Baltic, ebe ọ bụ na ma ọ bụghị na nsonaazụ ya nwere ike ịnwụ.
Oké ifufe bụ ihe anyị ga-elebara anya nke ọma, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na mba ndị nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ, ebe ajọ ifufe na-adịkarị, mana n'oge na-adịghị anya ga-emetụta akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ oke ebili mmiri na gịnị kpatara anyị ji echegbu onwe anyị?